स्वास्थ्य Archives - खबरम्यागजिन
निद्रा लाग्दैन? यसो गर्नुहोस्
स्वस्थ तन र मनका लागि मीठो र गहिरो निद्रा अपरिहार्य मानिन्छ । पर्याप्त निदाइएन भने डायबेटिज, डिप्रेसनजस्ता रोग लाग्नुको साथै वजन बढ्ने समस्या देखापर्न सक्छ । मीठो निद्राका लागि यी टिप्स उपयोगी हुन सक्छन्ः ‘हेभी […]
किन पर्छन् यवाहरू डिप्रेसनमा?
अहिले थुप्रै युवामा लागूपदार्थ, डिप्रेसन तथा असाधारण चिन्ताको समस्या देखापर्न थालेको छ । बानी–व्यवहार, आर्थिक तथा सामाजिक समस्या आदिका कारण युवाहरूमा डिप्रेसन बढिरहेको छ । सानैदेखिको बानी, पढ्ने तरिका, लालनपालन तथा घर एवं सामाजिक वातावरण […]
मौसम बद्लिँदा के के हुन्छ?
– मौसम परिवतर्नसँगै तापक्रममा परिवर्तन आउने भएकाले विभिन्न भाइरस उब्जन्छन् । यसले गर्दा धेरैलाई टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, रुघाखोकी लाग्ने तथा थकावट महसुस हुनसक्छ । – राइनो तथा कोरोना भाइरसले मानिसलाई जाडो तथा गर्मी दुवै […]
January 23, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
डा. पिङ्की एलर्जीको समस्याबाट जो पनि ग्रसित हुनसक्छ। मौसम बदलिँदै छ। यो समय जाड़ोको धूलो-माटो प्रदूषित मिस्ट अनि फगको कारण एलर्जीको समस्या उब्जिनु सक्छ। त्यसैले समय हुँदै एलर्जीबाट सजग रहे, यो समस्याबाट हामी छिट्टै निजात […]
स्मोकिङले गर्दा आन्द्रा सुन्निने समस्या
स्मोकिङले एकरत्ती फाइदा गर्दैन भन्ने सर्वविदितै छ । यो फोक्सोको क्यान्सरको प्रमुख कारक त हुँदै हो, त्यसअघि यो अम्मलले आन्द्रालाई पनि क्षति पुर्‍याउँछ । हालै गरिएको एउटा अध्ययन अनुसार, स्मोकिङका कारण आन्द्रामा क्षति पुग्न सक्छ र त्यसै […]
हाम्रो शरीरमा असंख्य रोमछिद्र हुन्छन् जसका मुनि तेल ग्रन्थि अर्थात् ‘सिबेसस’ हुन्छन् । यी ग्रन्थिले ‘सिबम’ नामक तेल उत्पादन गर्छन् । त्यसबाट केशको चमक र छालालाई नरमपन प्राप्त हुन्छ । सिबम रोमछिद्रको माध्यमद्वारा छालाबाट बाहिर […]